Umthandazo onamandla woPhuculo ▷ Descub️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
La umthandazo onamandla wokuphumelela Yiyo ekufuneka sithandaze xa sinqwenela ikamva elixhamlayo nelineziqhamo, hayi thina kuphela, sinokuthandazela ukunqwenela impumelelo kuzo zonke izalamane zethu kunye nabantu esibathandayo, kweli nqaku siza kukufundisa ukuba kanjani.
1 Umthandazo onamandla wokuchuma kwabo bonke abo banqwenela njalo
2 Umthandazo wokuchuma egameni likaMoya oyiNtloko uMikayeli
2.1 Umahluko phakathi kobuninzi, ubutyebi kunye nokuchuma
Umthandazo onamandla wokuchuma kwabo bonke abo banqwenela njalo
UThixo unesisa ngendalo, yonke imimangaliso ekufuneka inikezwe ixhomekeke kwindlela esondela ngayo yokucela uSomandla. Ukuba nekratshi kwaye sikholelwe ukuba aMandla aPhakamileyo asibatyala into engalunganga kwaye iya kubangela umgama phakathi kweNkosi nathi. Emthandazweni kufuneka uthobeke kwaye unyaniseke kwisicelo esenziweyo kwaye kufuneka usoloko ubulela, kuba uThixo uyasinika, kodwa uyarhoxa ngokuthanda.
Intsikelelo ihlala inyusa oko sinako, ke kufuneka sibekhona uKristu ngalo lonke ixesha. UThixo uyaziqhenya xa izicelo zethu zingezizo ezobuqu kuphela, kodwa nakwimithandazo yethu sibandakanya umntu wesithathu kwanaye wonke umntu el mundo Nokuba ungazazi, kuba iintsikelelo ziyanda.
Umthandazo onamandla wokuchuma unendlela ethile yokuyitsho, kufuneka uthandazelwe kangangeentsuku ezingama-21 eziqhubekayo, ukongeza kwindlela ekufuneka kuthandazwe ngayo yahlukile, ibinzana ngalinye kufuneka liphindaphindwe kathathu. Ngale ndlela siyaqinisa isicelo kwaye sicoca uqoqosho lwethu.
Umthandazo onamandla wokuchuma uya kusinceda siwathobele amatyala esinokuba nawo, ikwanceda nababolekisi bethu ukuze babeke ityala abanalo nathi. Lo mthandazo uyamangalisa xa sifuna ukuthengisa ipropathi okanye ukuphumelela kwityala eliza kusithanda, ngentlalontle kunye nokuchuma.
Ngomthandazo sivula iingcango zokuba uThixo azukise ngathi, ebomini bethu. Kufuneka sihambisane, kufuneka sizingise, kufuneka sibonise uThixo ukuba ubalulekile kuthi kwaye kufuneka simanyelwe. Igama linamandla nangaphezulu xa lithethwa kwisivakalisi. Ukuba uyafuna, ungayenzi wedwa, ungathandaza kwiqela lomthandazo, apho iintliziyo, iingqondo kunye neenjongo ezilungileyo zidibana, nokuba wonke umntu uphinda umthandazo omnye, iyakuba yintsikelelo leyo, kuba uThixo uyakubabona ngamnye emzukisa.
Masilungiselele ukuthandaza, ngumzuzu wozuko, wentshiseko esivula kuyo iintliziyo zethu kwaye sivumele ukungena kukaThixo kuthi. Sizolisa iingqondo zethu kwaye sigxile ekuzoliseni umphefumlo wethu kwaye sifikelele kwinqanaba eliphezulu elisivumela ukuba sinxibelelane namandla amahle eNkosi yethu. Sivumela nakuphi na ukukhathazeka kuphume ezingqondweni zethu kwaye siziva sinoxolo nothando olukhulu.
Nkosi Yesu endimthandayo, wena ophalaze igazi lakho elixabisekileyo emnqamlezweni ukuze undikhulule ebugxwayibeni nasezonweni, ndifuna ukubulela ngedini lakho ngaphandle kokuba ndikubuze, Ndiyabulela Bawo wethu othandekayo, Enkosi Nkosi Yesu.
Wena unguBawo onobubele nenceba, ndiyazi ukuba uza kuphumelela endleleni yam, namhlanje ndiyabhengeza ngokholo ukuba ndiyakhula, ukuba ndavela kwishishini lam, ngeenjongo zam, ndiyakucela ukuba undikhaphe kule ndlela kuba Ndikhulule kubo nabuphi na ubukhoboka, susa umona kum, ususe naluphi na utshaba olunokuphazamisa impumelelo.
Ndingaphantsi kwesigqubuthelo sobukumkani bukaThixo kwaye ndixhomekeke kwisithembiso selizwi lakho, intliziyo yam ivulekile ukuba yamkele yonke into ondinika yona, ukuqhubela phambili ngolonwabo kunye nokuchuma kwaye ukwazi ukuhamba phambili nosapho lwam. Uyandazi, uyazi ukuba ndingumntu olungileyo, osebenza nzima kwaye ndicela kuphela ukuba undinike ubulumko, ndinike isikhokelo sakho kwaye ususe nabani na ofuna ukuphazamisa kwishishini lam, emsebenzini nakusomashishini, ukuze ndibe umntu ophumelelayo.
Umthandazo wokuchuma egameni likaMoya oyiNtloko uMikayeli
Uthandekayo uSaint Michael isiphatha-zingelosi, wena owoyisile ububi kwaye usinika ithemba usikhusele yonke imihla kubunzima, siyakucela namhlanje, sithunywa sezulu, ukuba usikhokele usikhathalele, Ingelosi eyintanda. Wena okukuko ukukhanya kuwe, hamba ecaleni kwethu ukhanyise indlela yethu, wena uyingelosi ekhuselekileyo nethembekileyo, sithatha isandla sakho ukulandela umzekelo wakho ongcwele.
Namhlanje ngomphefumlo wethu ucocekile ezonweni, siyabuhlonipha ubukho bakho kunye nenkampani, sivula iintliziyo zethu ukuze uzive ukhululekile kwindawo yakho yokuhlala, uyicoce, uyihlambulule, uyenze ikufanele.
Sikwavula iminyango yamakhaya ethu kunye neshishini lethu, ukuze ngobuso bakho obungcwele ulahle bonke ububi, wonke umona, wonke umnqweno ombi. Sigqume ngekhaka lakho ebusweni bobubi obusitheleyo, sigcwalise ngobulumko bokubuqonda kwaye ungangeni kwimigibe yabo. Sikhulule kwimbandezelo noxinzelelo oluveliswa kukungaqiniseki, ngenxa yesi sizathu ndiyakucela ukuba undiqinise elukholweni, undilolonge amehlo ukuze ndibone amathuba kwaye kungasweleki sonka ekhaya.
Intanda enguMikayeli iNgelosi enkulu, sineentliziyo zethu ezandleni zethu, sicela ukhuseleko lwakho, usikhathalele kubo bonke ububi, usithethelele phambi koThixo iNkosi yethu, ukuze sibe ngabantu abachumileyo. Sithandazele phambi koThixo naphambi koThixo oneziqu ezithathu, babonise ngamehlo kaThixo ukuba silufanele usindiso lwabo. NgoKristu iNkosi yethu. Amen
Umahluko phakathi kobuninzi, ubutyebi kunye nokuchuma
Sikubona kubaluleke kakhulu ukukuxelela ngumahluko phakathi kobuninzi, ubutyebi kunye nokuchuma, kuba xa sisenza umthandazo onamandla wokuchuma, asinakho ukucela ubuninzi okanye ubutyebi, kuba zizinto ezahlukeneyo, ke ngoko kubaluleke kakhulu ukuba kucacile xa sicela impumelelo yethu.
Ubuninzi bunxulunyaniswa nobungakanani, ubukhulu becala ubutyebi busondele kumandla, imali, ipropathi, ngelixa ukuchuma kunxulunyaniswa nokulunga, impumelelo kwinto esiyifunayo kwaye ingumsebenzi wokufumana okuninzi njengoko sele ukunikile. Njengoko sibona bahluke ngokupheleleyo omnye komnye.
Siyathemba ukuba senze igalelo elihle kweli nqaku libhalwe ngenjongo yokulungiselela umthandazo nokucela impumelelo. Ukuba uyithandile, siyakumema ukuba uqhubeke ngokufunda okusemgangathweni kwiikhonkco esizicebisa ngezantsi.